Arabia Saodita: Inona no tadiavin’ny vahoaka? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2011 8:53 GMT
Raha nameno ny faritra ny fihetsiketsehana, dia nampiaka-peo koa ny Saodiana. Efa nivezivezy ny fanangonan-tsonia omena ny Mpanjaka Abdulla, misy ny fangatahana mikatsaka ny fanovana politika maro.
Ny fangatahana, nomena anarana hoe ” Firenena manana ny zo sy ny lalàna fototra” dia azo jerena ao amin'ny aterineto, ahitana fitakiana mitotaly valo, nosoratana tamin'ny fomba mendrika sy manara-dalàna. Nanomboka tamin'ny fangataha-pitahiana ho an'ny fitondram-panjaka sy ny firarian-tsoa ho an'ny Mpanjaka izany.
Toy izao ny tao anatin'ny fangatahana:
Tokony olona nofidiana avokoa ny mpikambana ao amin'ny Filan-kevitry ny Shura, ary tokony manana fahefana hametraka fitsipi-pifehezana sy hanara-maso ny solontena mpanatanteraka, anisan'izany ny fanaraha-maso ny volam-panjakana, ary koa manana zo hamotopototra ny praiminisitra sy ny minisiterany.
Manasaraka ny asan'ny Mpanjaka amin'ny toerana maha praiminisitra, ny praiminisitra vaovao no tokony handray ny fankatoavan'ny Mpanjaka sy ny fitokiana avy amin'ny filankevitry ny Shurat.
Atomboka ny asa amin'ny fanovana eny anivon'ny fitsarana, ny fandrosoany ary omena azy ny fahaleovantenany tanteraka, ampitomboina araka ny isan'ny mponina sy ny vokatry ny fitombon'ny mponina ny isan'ny mpitsara.
Sorohina ny kolikoly ara-bola sy ara-pitantanana ary sakanana amin'ny fomba hentitra ny fihoara-pahefana sy ny fanangonan-karena tsy ara-dalàna tsy ijerena izay lohanarony na ny fanoherana noho ilay izy, mametraka rafitra miady amin'ny kolikoly, natokana hanadihady momba ny kolikoly sy hanaitra ny fatsarana.
Mametraka fepetra ahafahana mamaha ny olan'ny tanora, mikaroka-bahaolana hanafoana ny olana fototra momba ny tsy fisian'ny asa ary ny fanomezana trano ipetrahana mba ahafahany miaina ara-dalàna.
Fandrisihana ny fametrahana ny rafitra ho an'ny fiarahamonim-pirenena sy ny sendikà ary foanana ny lalàna rehetra manakana ny fananganana azy ireo.
Famahana ny fahalalahana miteny tompon'andraikitrasy fisokafana miresaka amin'ny olona, fanovàna ny fitsipika sy ny lalàna mifandraika amin'izany.
Atomboka ny famoahana ireo gadra noho ny hevitra sy ireo izay efa nahavita sazy ary koa ireo izay tazonina mbola tsy nandalo fitsaràna . Ny fametrahana ny “rafi-pitsarana ” ka ampidirina ho anisan'izany “ny lalàna momba ny heloka bevava” sy ny rafi-pitandroam-pilaminana sy ny biraon'ny fanadihadiana. Hanana fahefana momba ny fihazonana, ny famotopotorana ary ny fanagadrana sy ny fitoriana io rafitra io; ary hamela ny voampanga hifidy mpisolo vava hiaro azy sy hanamora ny fifandraisan'izy ireo. Tokony afaka manatrika fotoam-pitsarana araka ny voasoratra ao amin'ny lalàna.
Maherin'ny 1000 ireo Saodiana nanao sonia ny fangatahana ary mitombo izany isa izany. Ao amin'ny pejy Facebook misy izany, maherin'ny 4500 ny anarana ao. Anisan'izany ireo manampahaizana Islamika toy i Dr. Salman Alouda,sy Dr Yousef Alahmed, ao koa ny mpianatry ny oniversity, ny mpanoratra, ny tompon'andraikitra sy ny mpitolona ara-politika.
Nahatonga ary mbola nahatonga fihetseham-po lehibe tamin'ireo tanora Saodiana ny taratasy, maro ireo izany nanohy nametraka ny fangatahany tao amin'ny Twitter amin'ny alalan'ny teny fototra #saudimataleb. Ireto ambany ireto ny sombiny tamin'ireo fihetseham-po:
“Ny kolikoly ara-pitantanam-bola no mitana ny laharana voalohany ” Dr. Madawi Alrasheed
Efa tsy ilaina intsony ny fanasokajiana taloha: Islamika, Liberaly, Sonita ary Shi'ita. Ny fanasokajiana ankehitriny dia : mankasitraka sa manohitra ny fanovàna ianao?
Fanampin'izany, nisy vola narotsaka tamin'ny anaran'i @SaudiMataleb mba hanaparitahana izao tontolo izao ny fangatahana amin'ireo mpi-tweet Saodiana.
Nefa tsy nanaiky i @SHIFT_0 :
Na dia eo ary ny fanajako, firenen'ny mpitady tombontsoa manokana isika. Raha ny governemanta no tombontsoa ho antsika, izy no tsara indrindra. Raha tsy mahita tombontsoa amin'ny governemanta isika, dia tsy rariny ka mila fanovàna !